Nkà na ụzụ na-adịghị ala ala a bit ... er Flop! | Martech Zone
Teknụzụ Na-adịghị Azụlata A Bit… er Flop!
Gordon E. Moore bụ onye nchoputa nke Intel na Fairchild Semiconductor bụ onye dere akwụkwọ akụkọ 50 afọ gara aga nke buru amụma okpukpu abụọ nke ọnụọgụ nke ihe mejupụtara kwa sekit na-eme kwa afọ. Afọ iri ka nke ahụ gasịrị, na 10, ọ degharịrị amụma ahụ na kwa afọ abụọ ọ bụla… na amụma ya abụgo nke ziri ezi. A maara ya ugbu a dị ka Iwu Moore.
Iji nye otu ihe atụ, ndị Apple Watch (nke m nwere obi ụtọ ma nwee ike ịkwado ya) nwere ikike nhazi nke ihe dị ka 2 iPhone 4 smartphones. Ọ kariri 1985 Cray-2 supercomputer… na nkwojiaka gị. Nke ahụ bụ ihe ngosipụta enyere akara nke ngwaọrụ niile ma ọ na-esiri m ike iche echiche ọbụlagodi Gordon Moore chere na anyị ga-anọ ebe anyị nọ taa.
Kọmputa kọmpụta gara n'ihu na-abawanye arụmọrụ ka ọ na-ebelata na nha, na-enye ohere maka ihe ọhụụ ndị injinia echeghị na ọ ga-ekwe omume. Afọ 40 gara aga, ọtụtụ mmadụ ekwenyeghị na anyị ga-enweta ozi na-enweghị nsọtụ site n'ọbụ aka gị.
Kedu ihe nke a pụtara maka ndị ahịa? IMO, ọ pụtara na anyị nọ n’isi mmalite nke ihe enwere ike ịrụzu site na njikarịcha azụmaahịa na ịkọ amụma azụmaahịa. Oge a nchịkọta nyiwe mara mma nke ọma - na - ewe ọtụtụ data ma na - enye akụkọ dị mfe. Usoro data buru ibu na-aga n'ihu ịchụpụ ihe ọhụrụ na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa iji kwalite usoro ịkọ akụkọ n'ime usoro amụma - nke ga-eme ka ahụmịhe onye ọrụ na nsonaazụ ahịa.
Ike nhazi dị oke mkpa n'ihi na ngwaọrụ maka mmepe na nyiwe enweghị njedebe a na-adị mfe ma dịkwa mfe ịme. Otu ihe atụ, ma ọ bụ N'ezie, bụ nnukwu data nchekwa data engines. Site na ịmepụta data njikarịcha onwe na ajụjụ ajụjụ, ụlọ ọrụ nwere ike ịkwalite ihe mmepe iji wuo atụmatụ ọhụrụ - ọ bụghị ịmegharị na tweaking ọdụ data iji rụọ ọrụ nke ọma. Oge ndị a bụ oge obi ụtọ!
Tags: iwu mooresike nhazi